Avril Lavigne, music, music, Biography, gabay, heesaha
Avril RAMONA Lavigne(* 27 September 1984, Belleville, Ontario, Canada) waa fanaan Faransiis ah oo Canadian ah siddeed jeer oo loo sharraxay abaalmarinta Grammy. Waalidiinteeda waxay ka timid asal ahaan Faransiis, mana aysan awoodin inay ku hadlaan Faransiis muddo dheer. Laakiin waxay dhawaan tagtay casharada Faransiiska waxayna u guureen Paris maalmo yar.In 2006 waxaa lagu daray majaladda Canadian Business Magazine for toddobaad darajayn meel ka mid ah Kanada ugu saameynta badan ee Hollywood.
Waxay ku dhashay Belleville, Ontaariyo, Canada si Judith-Rosanne "Judy" (oo ku dhashay Loshaw) iyo Jean-Claude Lavigne. Magaca Avril waxaa doortay aabaheed, kaasoo ka yimid Faransiis, sida laga soo xigtay ereyga Faransiis ee Abriil - avril.Avril xitaa walaalkiis ka weyn, Matthew, iyo walaasha da 'yar, Michelle.Avril ayaa bilawday bilawga goor, markay da 'ahaan jirtay labo gabdhood oo ay la sheekeysatay hooyadeed. Markii Avril uu ahaa shan, qoysku waxay u guureen Napanee.
1998, waxay ku guuleysatay tartanka raadiyaha,halkaas oo abaalmarinta ugu weyni ay ahayd in lagu heeso Shani Twain. Munaasabaddeeda oo ka dhacday Xaruunta Corel (hadda Scotiabank Place) ee ku taal Ottawapeak waxay heesay heesMaxaad Samaysay Midaas?.
Intii lagu guda jiray waxqabadka Tiyaatarka Bulshada ee Lennox, waxay qabatay dareenka fanaaniinta maxalliga ah ee Steva Medda (oo ah qaraabo saxafiyiin ah oo reer Canadian Ben Medd), ka dibna ku casuumay inay ka qayb gasho heestaTaabta Sky ahon albumkiisaQuinte Ruuxa(oo la daabacay 1999). Albaabka xigay,My Window inaad, kaas oo soo baxay sanad, ka dibna Avril heeso heesayTemple of Life a Laba webiyada.
Marka heeso dalka daboolayaa at dukaanka a ee Kingston, Ontario, ayay dareentay iyada tababare ka iman kara Cliff Fabri, kuwaas oo markaas u soo diray videos gurigeeda qaab dhowr qof oo wax raadayn kara in industry music ah. Mark Jowett, co-aasaasaha shirkadda maamulka Canadian Nettwerk, wuxuu ahaa mid ka mid ah kuwa dadka saameynta iyo cajalado karaoke Avriliny sameeyey dhulka hoostiisa uu jeclaa. Sidaas daraaddeed waxay ku dhameysatay iyada oo kaashanaysa Tababaraha Peter Zizzo, kuwaasoo la iyadu shaqeeyay muddada 2000 xagaaga ee New York iyo ku qoray song halkanWaa maxay sababta?. Intii ay ku sugnaatay New York, Arista Records ayaa hore u aragtay iyada oo heshiis la saxiixatay iyada. Ilaa lix iyo toban jir ah waxaa la siiyay fursad ay ku shaqeyn karto albaabkeeda koowaad.
ha Go(2002 - 2003)
ha Godaabacay 4. July 2002 iyo kaalinta labaad ee Billboard Billboard iyo kaalinta koobaad ee Australia, Canada iyo UK. Tani waxay ka dhigtay fanaankii ugu da'da yaraa in uu sameeyo wax sidan oo kale ah UK.(2003, rikoodheeda waxay dhaaftay Joss Stone). Hal bil kadib markii la sii daayay, albaabku wuxuu ahaa multiplatinum, laba toddobaad ka dib saddex jeer platinum, iyo lix bilood kadib xitaa afar jeer platinum. Worldwide, 16 ayaa ku iibisay malaayiin.
Afar singles ayaa laga sii daayay albumka. SongDhibtoodamarkii ugu horeysay Australia Australia, Hot Hot 100 oo kaalinta labaad ku jirta, Canada waxay noqotay midka ugu badan ee iibiya Kanadiyaanka ugu fiican ee sanadka 2002. Waxay ka adkaatay rikoorkii Natalie Imbruglie markii ay ku guulaysatay inay sii haysatoDhibtoodamarka ugu horeysa jaangooyooyinka casriga ah ee casriga ah ee kow iyo toban usbuuc oo isku xiga. Cinwaanada soo socdaSk8er ceyriyay a Anigu waan kula jiraawaxay gaadheen tobanka sare ee darajada US,Anigu waan kula jiraaka dibna xitaa tobanka sare ee UK iyoLuminta gacantawaxa ay ku dhaliyeen Top 10 ee Taiwan iyo Top 20 ee Chile.
SheekoDhibtoodawuxuu ku guuleystay abaalmarinta ugu wanaagsan ee Farshaxanka cusub ee MTV Video Music Awards 2002.Abaalmarinta Juno ee 2003 wuxuu bedelay afar ka mid ah lixda musharax ee la guddoonsiiyay Abaalmarinta Miyuusadka Adduunka ee loogu talagalay fanaankii ugu fiicnaa ee Canadian ee adduunka. Guul weyn oo ka dhacday 2003 wuxuu ahaa siddeed magac oo loo yaqaan 'Grammy', oo ay ku jiraan Best Actress iyo Song of the YearDhibtooda(2003).
Under My Maqal(2004 - 2006)
Avril Lavigne inta lagu guda jiro waxqabadka Prague
Albaabkeeda labaadUnder My Maqal25 sii daayay. 2004 laga yaabaa in USA. Waxaa markiiba lagu meeleeyay meesha ugu horeysa, iyo sidoo kale in ay UK, Germany, Japan, Australia, Canada, Mexico, Argentina, Spain, Ireland, Thailand, Korea iyo Hong Kong. In Maraykanka ayaa lagu iibiyo iibka isbuucii ugu horeysay in ka badan oo gogo '380 000.Wixii ugu of songs ku wada shaqeyn la leh Xisbi Canadian Chantal Kreviazuk, songs qaar ka mid ah ay ahaayeen lug iyo Ben Moody (hore ee Evanescence), Butch Walker iyo iyada guitarist hore Evan Taubenfeld. Chantal Kreviazuk ninkeedii, Butch Walker iyo Don Gilmore soo saaray heestii.
Hal mar horudhacHa i sheeginayaa kaalinta koowaad ka galay Argentina iyo Mexico, UK ee ugu sareeya 5 iyo 10 sare ee Australia iyo Brazil. SinglMy afjaridda Happywuxuu helay USXXUMX oo noqday kaalinta saddexaad ee ugu weyn Mareykanka. Saddexaad oo keliya, "Qofna Gurigiisa", ma gaadhin 10 sare. Hal afaraadMa ahaynwuxuu ku helay 23 UK. meel iyo 25. Australia iyo Mareykanka looma fasaxin hal ahaan. Xataa xitaa ugu dambeyntii,Dhaca si Cadad, guusha ugu horeysay ee ka timid buugan lama soo celin.
Abaalmarinta Caalamka Music, 2004 wuxuu ku guuleystay laba abaalmarin: Artist Best Actor iyo Actor Best Canadian ee Sanadka. Waxay ku guuleysatey shan magacood oo ah Juno Award 2005, saddex ka mid ah oo ay ku guuleysatay. 18. Nikelodeon Kids 'Choice Prize ayaa abaalmarinta abaalmarinta abaalmarinta gabdhaha ugu fiican.Avril ayaa hees la heestay Matthew GerardJabanloogu talagalay Kelly Clarkson waxayna iyadu u muuqatay muuqaalka filimkaXusuus-qorka 2iyo Kelly album, oo sidoo kale loo yaqaan 'Breakaway'.
Waxay ku socotay dalxiis aad uwanaagsan oo la yaab leh oo ku saabsan magaalooyinka 21 ee Maraykanka iyo Kanada si kor loogu qaado albumkaUnder My Maqal. Joogitaanka koowaad ee Minneapolis iyo Avril waxaa lagu soo bandhigay oo kaliya dukaamada qaybta iyo bandhig kasta oo ka kooban barnaamijyo gaaban oo akustikar ah. Waxa uu la socday guitarist Evan Taubenfeld. Aragtida ayaa la soo bandhigay ugu dambeyn laba maalmood ka hor. Socodku aad ayuu u guulaystay.
Sannadka intiisa badan, 2005 wuxuu ku sugnaa dalxiis waxaana uu bilaabay shaqadiisa iyo xirfadkiisa. Waxay ku qabatay ciyaaraha Winter Olympics ee 2006 ee Turin, Talyaaniga, oo leh heesYaa Garanayamarka la eego wareejinta rasmiga ah ee loo yaqaan 'relay' ee ciyaaraha qaboobaha ee Canada, halkaas oo Ciyaaraha Olombigga lagu qaban doono 2010.
The Wax maydhan biyaha Best(2007 - 2010)
Sheekadooda saddexaad,The Wax maydhan biyaha Best, oo la soo saaray April 2007. Waxaa soo saaray Dr. Luke, ninkeeda Deryck Whibley, Rob Cavallo, Butch Walker iyo nafteeda. Travis Barker wuxuu ahaa mujuruc ah albaabka. Farshaxankiisii ​​ugu horeeyay raadiyaha waxaa lagu sii daayay raadiyaha "Hot 89.9" ee Ottawa 14. Abriil 2007 ee 6 galabtii. Sheekadeeda MySpace, waxay shaaca ka qaaday in midda koowaad ay noqon doonto heessaaxiibtiisiyo in ay ka soo baxdo 29. Janaayo, laakiin taariikhdani waxay u wareegtay sababtoo ah korodhka raadiyaha sii kordhaya oo ah kan keliyaKa dhig Holding On. Singlsaaxiibtiiswuxuu lahaa halyeeyga 26. Febraayo. Waxa uu sameeyay kulankiisii ​​shanaad ee Billboard Hot 100. Tani waa kulankiisii ​​ugu fiicnaa ee ugu fiican, waxaana laga iibiyey internetka iyada oo loo marayo qaybaha 122 000 ee dukaanka iTunes online.saaxiibtiiswaxaa sidoo kale lagu soo bandhigay kaalinta saddexaad ee Billboard's Top Digital Songs, oo ahayd markii labaad ee Avril uu ahaa fanaankii ugu horeeyay ee gool dhaliya.Ka dhig Holding On). Songsaaxiibtiischorus a sung sideed luqadood oo kala duwan. Waxa uu ku gabyeen in Isbaanish, Boortaqiis, Mandarin Chinese, Japan, Talyaani, Jarmal, Faransiis iyo dabcan Ingiriisi. kali kale guul ka album ahThe Wax maydhan biyaha Bestwaxay ahaayeen heesoMarkaad ku laabato a Hot. Bishii Maarso, 2008 wuxuu bilaabay Avril on The Best Damn Tour si uu u taageero iibinta albumada cusub. Isla bishaan, waxay sidoo kale u muuqatay markii labaad mar labaad ee xirfad ku saabsan daboolka majaladdaMaxim. Bishii August waxaa lagu soo bandhigi ee Kuala Lumpur, laakiin xisbiga Malaysia Islamic mucaaradka, Pan-Malaysian xisbiga Islaamiga ah, rabay riwaayad inay ka mamnuucaan, sida dhaqdhaqaaqa Avriliny on stage waxaa la sheegay in ay "aad u sexy" iyo riwaayad ah, taas oo lagu qabtay laba maalmood ka hor Maalinta Xornimada ee dalka Malaysia, taas oo u dabaal 31. August la filayo ololeeyey lahaa dhaqan xun.
Bishii Nofeembar 2008, bil kadib dhammaadkii Dhamaan Baaskiilada Wanaagsan, wuxuu bilawday heeso heeso ah oo ku taala studioBlack Star, kaas oo loo qoray olole xayeysiis ah oo loogu talagalay qurubka magaciisa oo kale.Bishii Luulyo 2009 ayaa sagaal heesood loo duubay albaabka cusub,oo ay ku jiraan heesoFine, Qof walba i dhaawaceysaa a Darlin. Qaar ka mid ah tracks ayaa hore u qoray Avril,DarlinWaxa ay ahayd hees labaad in ay ku qoray shan iyo toban ah markay ku noolaa Napanee, Ontario. album ayaa sheegay in ay a "nolosha". "Wax dhibaato ah kuma, qori song ah, kuwaas oo aad ka dhigi doonaa mid xiiso leh of guys ama iyaga si fiican u xidheen shalash ilaa, laakiin fadhiistaan ​​oo si daacad ah u qori ku saabsan wax ku dhow yahay inuu qalbigayga, wax waxa aan ku dhex tegey, waa wax gabi ahaanba ka duwan, "ayuu yiri heesaha. Laga soo bilaabo album kaas oo noqon doona aqlabiyad,Avril ayaa la filayaa inuu ku laabto qaab ciyaareedkiisa muusikada. Sida laga soo xigtay Avril, heesaha albaabadu gebi ahaanba way ka duwan yihiin wax soo saarkoodii hore, marka laga reebo hal kelidiiWaa maxay jahannamada, "Hadda waan koray, waa in laga hadlo muusigayga, ma aha kaliya dhagax weyn."
In January 2010, halka ka shaqeeya on album cusub, waxa uu darbo in ay la shaqeeyaan Disney iyo abuuray ururinta a for naqshado dhar u waxyooday by Tim Burton ayaa Alice in Ihmemaa. Waxay waydiisatay Disney haddii aysan qori karin filimka filimka, sidaa daraadeed waxay samaysay heesAlice,kaas oo u muuqday filimkii xilligii ugu dambeeyay, waxaana uu u muuqday mid caan ahKu dhowaad Alice
Intii lagu guda jiray munaasabadda xafladda xiritaanka ee XXI. ciyaaraha Winter Olympics ee 2010 ee Vancouver heesaha heesaha AvrilMy afjaridda Happy a saaxiibtiis. Inkastoo si weyn u miisaamay in matali karo in riwaayad, ka qoomameeyay inuusan ka qeyb laga yaabaa sababta oo ah isaga ciyaarta xeegada u dhexeeya Maraykanka iyo Kanada, "waxay noo xajiseen kulli ku qufulan. Sababtoo ah nabadgelyo darrida awgeed, looma ogola inaan ka baxno safarkeena. "
Siidaynta rasmiga ah ee albumka ayaa dib loo dhigay dhowr jeer. "Waxaan ku soo qorayaa muusikada gaarka ah sidaa daraadeed waxay igu qaadataa wakhti dheer in la wada duubo dhammaan cajaladaha, sababtoo ah waa inaan marka hore ku noolaadaa wax aan wax ka qoro,Avril ayaa marar badan dib u dhigtay, isaga oo intaa ku daray in ay hadda haysato wax ku filan laba guddi.Bishii Janaayo waxay u sheegtay Maxim magazine in albaabku yahayGoodbye Lullabywaxaa la dhameeyey laba sano iyo barwaxaana ku daray in sababta dib loo dhigay ay tahay shirkadeeda diiwaankeeda, sida dhab ahaantii la dhameeyey sanad.Goodbye Lullaby8 waa in ay ka muuqato roogga. Maarso.Midda ugu weyn,Waa maxay jahannamada, lahaa lahaa premier of 31. Bishii December ee Dick Clark's Rockin 'Eve ee New Year.
Bishii Diseembar 2010 wuxuu sii daayay heesaha caanka ah ee Mareykanka Miranda CosgroveDancing Crazy, oo uu qoray Lavigne, Max Martin iyo Shellback. Martin sidoo kale wuxuu soo saaray heesaha. Waxaa la ogaaday in jaantuskan asal ahaan loogu talagalay albaabkaGoodbye Lullaby, laakiin ugu dambeyntii waxay u timid inay isticmaasho.
Bishii Janaayo 2011 ayaa markii ugu horreysay sii deysayGoodbye Lullabyoo leh magacaWaa maxay jahannamada.
Qeybta labaad ee albaabadaGoodbye Lullabywaa heesSmile, kaas oo la daabacay 20. May 2011.
Midka saddexaad wuxuu noqday heesJeclaan lahaa inaad Halkan, 9 ayaa la sii daayay. Sebtembar oo leh cajalad fiidiyoow ah, isla markiiba wuxuu noqday midka ugu guulaha badan albaabkaGoodbye Lullaby.
Waxay bilowday inay ka shaqeyso qaybta shanaad kadib markii la sii daayayGoodbye Lullaby. Qeybta koowaad ee ka soo wareegtay albumka soo socda ayaa noqday heesaha "Halkan waxaa ah inaan marna korin". Gabaygan ayaa sidoo kale waxaa lagu soo bandhigay gabdhi ay la socdeen ninkeeda Chad Kroeger ama heestaGabadh xun, oo la abuuray iyada oo lala kaashanayo Marylin Manson. Iyadoo ay ku dhexmuuqday qolka Viper ee Los Angeles, waxay u heesay heesaheeda sheekada "Todoba iyo toban", Kaas oo sidoo kale ka muuqda guddiga. On 18. July ayaa bilawga labaad ku soo bandhigay kanaalkaaga YouTubeRock N Roll. Heesta ayaa si rasmi ah loo sii daayay 30. Julaay. Heeso kaleIi sii daawuxuu bilaabay heesaha 7. Oktoobar, oo ay ku xigto clip video ku saabsan maalmaha 8 ee dambe. Albaabkeeda oo dhan waxaa sii daayay 5. November. Avril mar horeba wuxuu bilaabay safar caalami ah mana ku socdo Jamhuuriyadda Czech. 2014 ayaa la sii daayay dabayaaqadii April. midda Japan ee "Hello Kitty," oo lagu soo rogay naqdin, ayaa xitaa loogu yeeray cunsuriyad sababtoo ah diiradda koowaad ee suuqa Japan.
Taageerayaasha Avril Lavigne ayaa loo yaqaan 'Little Black Stars'. Avril wuxuu jecel yahay xiddigaha mid ka mid ah cadaradeeda waxaa lagu magacaabaa Black Star. Avril ayaa sidoo kale martigelisay dalxiis "Black Star Tour". Xiddigaha ayaa xitaa shaati.